Warar - Hordhac aasaasi ah oo ku saabsan Towrarka qaboojinta
Taawarka qaboojiyaha waa kuleyliyaha kuleylka, kaas oo kuleylkiisa laga saarayo biyaha iyadoo lala xiriiro biyaha iyo hawada. Taawarrada qaboojintu waxay u isticmaalaan uumi-baxa biyaha si ay u diidaan kuleylka hannaanka sida qaboojinta biyaha wareega ee loo isticmaalo saliidda sifeynta saliidda, dhirta kiimikada, warshadaha tamarta, makiinadaha birta ah iyo dhirta wax soo saarka cuntada.
Minaaradda warshadaha qaboojinta biyaha waxay u soo saartaa kuleylka qashinka jawiga in kasta oo qaboojinta qulqulka biyaha ay gaarsiiso heer kul hoose. Taawarrada adeegsada hawshan waxaa loo yaqaannaa munaarado qaboojin uumi baxa. Kuleylka kuleylka waxaa lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo hawo ama uumi bax biyo. Wareegga hawada ee dabiiciga ah ama wareegga hawada ee qasabka ah ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo waxtarka looga baahan yahay ka shaqeynta munaaradda iyo qalabka loo adeegsado hawsha.
Nidaamka waxaa loogu yeeraa "uumi-baxa" maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa qayb yar oo ka mid ah biyaha la qaboojiyey inay uumi baxaan qulqulka hawada socda, iyagoo siinaya qaboojin weyn inta hartay biyahaas. Kuleylka ka soo qulqulaya durdurka biyaha ee loo wareejiyay hawo-mareenka wuxuu sare u qaadayaa heerkulka hawada iyo qoyaankiisa illaa 100%, hawadanna waxaa loo sii daayaa jawiga.
Aaladaha diidmada kuleylka uumi-baxayaasha - sida nidaamyada qaboojinta warshadaha - waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo heerkulka biyaha si aad ah uga hooseeya kan lagu gaari karo aaladaha diidmada kuleylka ee "hawo-qaboojiyaha ah" ama "qalalan", sida hiitarka gaariga ku jira, sidaasna lagu gaarayo kharash badan oo wax ku ool ah iyo hawlgalka tamarta ku habboon ee nidaamyada u baahan qaboojinta.
Taawarrada qaboojinta biyaha ee warshadaha waxay ku kala duwan yihiin cabbir ka kooban unugyada saqafka-sare ilaa dhismooyin aad u ballaaran oo hyperboloid ah (hyperbolic) oo dhererkoodu noqon kara 200 mitir iyo 100 mitir oo dhexroor ah, ama dhismayaal afar-geesood ah oo ka badan 15 mitir iyo 40 mitir dheer. Taawarrada yar-yar (xirmo ama qaybsan) caadi ahaan waa kuwo warshad lagu dhisay, halka kuwa waaweyni si caadi ah looga dhiso goobta agabyo kala duwan.